कुलमान–मोदी विवादको चुरो ३ हजार मिटर तार ! – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
जेठ, काठमाडौं । मंगलबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सत्तारढ सांसद नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीसँग भनाभन भयो ।
सत्तारुढ नेकपा सांसद मोदीको कुलमानप्रति आक्रोशको तार भने कटहरी सबस्टेसनसँग जोडिएको विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । विद्युत प्राधिकरणले मोरङको कटहरीमा सबस्टेसन निर्माण गरेको दुई महिना बढी भयो ।
तर, दुहवी सबस्टेसनबाट लगिएको ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा मोरङको ग्रामथाम गाउँपालिकाको गिदनियामा स्थानीयको अवरोध छ । ग्रामथाम मोदीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ ।‘असहयोग भएमा यो क्षेत्रमा फोर्स लोडसेडिङ हुने जानकारी गराएको थिएँ । तर उहाँले धम्क्याउने भन्दै लेखा समितिमा देखाउने’ चेतावनी दिनुभएको थियो,’ कुलमानले भने ।
हेर्नुहोस् लेखा समितिमा कुलमानको अभिव्यक्ति
एक महिना अगाडि अर्थ मन्त्रालयको प्राङ्गणमा भेट हुँदा आफूले आयोजनाका लागि अवरोध हटाउन आग्रह गरेको घिसिङले बताए ।‘प्राधिकरणविरुद्ध कोशी कोरिडोर लगायतका योजनामा लेखा समितिमा उजुरी छ । अहिले जनताले नपत्याए पनि उहाँको नियत सही छैन,’ सांसद मोदी ।
महालेखाले उठाएको प्रश्न आफूले उठाएको भन्दै उनले अहिले छानविन भइरहेको भनेर उम्किन नमिल्ने बताए ।‘प्राधिकरणविरुद्ध कोशी कोरिडोर लगायतका योजनामा लेखा समितिमा उजुरी छ । अहिले जनताले नपत्याए पनि उहाँको नियत सही छैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
हेर्नुहोस् लेखा समितिमा मोदीको अभिव्यक्ति
BusinessDigital KhabarElectricityKulman GhisingLoad ShaddingNEANepal